Ayaa Xili Ciyaareedkan Ku Guulaysan Doona Koobka Champions League? Saadaashii Ugu Danbaysay Ee Super Computer. - Gool24.Net
Ayaa Xili Ciyaareedkan Ku Guulaysan Doona Koobka Champions League? Saadaashii Ugu Danbaysay Ee Super Computer.
February 3, 2020 Mahamoud Batalaale
Tartanka ugu xiisaha badan kubbada cagta aduunka ee UEFA Champions League ayaa bishan gudaheeda ku soo laaban doona garoomada Yurub iyada oo waliba la galay heerkii ugu xamaasada badnaa ee wareega 16ka kooxood.
Waqti kasta oo lagu jiro tartanka Champions League waxaa la sameeyaa saadaal lagu odorasayo kooxaha ugu cad cad ee koobkan ku guulaysan kara waxaana baryihii danbe saadaasha ku soo kordho tan habka casriga ah lagu sameeyo ee Super Computer.
Xili ciyaareedkan waxaa wareega 16ka kooxood ee Champions League ka jiri doona kulamo aad u xiiso badan iyada oo kooxo waa wayni ay geesaha isla gali doonaan.
Inkasta oo ay adag tahay in saadaal laga sameeyo kooxda ku guulaysan doonta koobka Champions League,haddana saadaasha lagu sameeyay Super Computer ayaa ah mid ayna soo dhawayn doonin taageerayaasha kooxo waa wayn oo rajo qabaa.
Xili ciyaareedkii la soo dhaafay waxa uu Champions League ahaa mid garab maray saadaashii la bixiyay waxaana markale suurtogal noqon karta in ay tii xili ciyaareedkii hore oo kale dhici karto.
Xili ciyaareedkii la soo dhaafay, Tottenham ayaa si lama filaan ah ku gaartay markii ugu horeysay abid finalka halka ay semi-finalka ku soo reebeen koox kale oo iyadana si lama filaan ah ku soo baxday Ajax.
Xaqiiqdii, cidna ma aysan fileynin in Liverpool ay ka soo muuqan doonto finalka ka dib markii ay guuldarro 3-0 ay lugtii hore ka soo gaartya Barcelona.
Laakiin wixii dhacay waan ogeyn iyo inay kooxda Jurgen Klopp hanteen koobka markii lixaad taariikhda.
Hadaba finalka Champions League oo sannadkan lagu qabanayo Istanbul – kooxdee ayaa ku guuleysan doonta? 16 kooxood ayaa haatan isku soo haray oo wareega 16ka uu u bilaaban doono dhamaadka bishaan Febraayo.
Super Computer ay isticmaashay FiveThirtyEight. ayaa saadaaliyay suurtogalnimada ay koox walba ku gaari karto wareega sideed dhamaadka, semi-finalka iyo finalka. Halkan xogta oo dhan ka eeg.
Haddaba akhriste, adigu kooxdee ayaa u saadaalinaysaa ku guulaysiga Champions League? labadee kooxood ayaad filaysaa in ay finalka iskugu iman karaan?